jamhuuriyadda Czech (Keska) (af-Czech: Česká republika) waa wadan ku yaalo qaarada Yurub. wadankaan markiisa hore wuxuu ka mid ah doladii ladhihi jiray Czechoslovakia intii eenan kala go'goin 1992dii. wadankaan waxaa la sameeyay 1 Janaayo 1993, wuxuu ka koobanyahay 2 gobol oo taariikh dheer leh Bohemiya iyo morafiya iyo gobol yar oo ladhoho Silesiya.Wadankaan waa wadan Dhax kujir ah, wuxuu xad la wadaagaa wadamada Jarmalka, Austriya,Islofaakiya iyo Boland.
Halka ay dhaco the Jamhuuriyadda Jek (dark green)
Isuduwe: 49°45′N 15°30′E﻿ / ﻿49.750°N 15.500°E﻿ / 49.750; 15.500
W:cs:Česko Waa waddan horumarsan  oo leh heer sare,  dakhliga sare  dhaqaalaha suuq-geynta dhaqaalaha bulshada oo saldhig u ah adeegyada, wax-soo-saarka iyo cusboonaanta. UNDP ayaa kaalinta 14-aad kaga jirta horumarinta aadanaha ee sinnaan la'aanta ah.  Jamhuuriyadda Czech waa dawlad bulsho oo leh qaab 'bulsho' Yurub ah, nidaam daryeel caafimaad oo guud iyo waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah. Waxay u taagan tahay waddanka 6aad ee ugu nabdana ama ugu caansan oo waa mid ka mid ah waddamada ugu caansan dunida oo dhan,  inta lagu gudajirayo waxqabadka xoogga leh ee maamulka dimoqraadiga ah. Jamhuuriyadda Czech waxaa ka mid ah dhulalka taariikhiga ah ee Bohemia,  Moravia, iyo Czech Silesia. Dawladda Czech ayaa la aasaasay qarnigii 9aad ee Duchy of Bohemia oo hoos timaada Boqortooyada Great Moravian. Ka dib dhacdadii Boqortooyada ee 907, xaruntii awoodda ayaa laga soo wareejiyay Moravia ilaa Bohemia hoosteeda hoosteeda Přemyslid. Sanadkii 1002, duchy waxaa si rasmi ah loo aqoonsaday inuu yahay qayb ka mid ah Boqortooyada Quduuska ah ee Boqortooyada,   waxa uu noqday Boqortooyada Bohemia 1198 oo gaadhay heerkeeda dhuleed ee ugu weynaa qarnigii 14aad. Ka sokow Bohemia lafteeda, boqorkii Bohemia wuxuu xukumay dhulka Bohemian Crown, wuxuu codkiisa ka helay doorashadii Roomaanka Quduuska ah ee Quduuska ah, Pragna wuxuu ahaa kursi sarsare oo u dhexeeyay qarniyadii 14aad iyo 17aad. Hussy Wars ee qarnigii 15aad ee ay soo rideen Dib-u-soo-celinta Bohemia, boqortooyadu waxay la kulantay xayiraad dhaqaale oo ay ku badisay shan jeer oo xidhiidh ah oo ay ku dhawaaqday hoggaamiyayaasha Kaniisadda Katooliga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamhuuriyadda_Jek&oldid=190565"
Last edited on 4 Febraayo 2019, at 10:55